Vaovao - Ivon-kintana Gemological an'ny Kambodza
Misaotra an-dRamatoa Angelina Jolie tamin'ity fitsidihana tsy nampoizina ity tao amin'ny trano fivarintsika androany
Misaotra an-dRamatoa Angelina Jolie tamin'ity fitsidihana tsy nampoizina ity tao amin'ny trano fivarintsika androany. Misaotra noho ny hatsaram-panahinao
Mogok Trip, Myanmar Taorian'ny nahatongavany tany amin'ny seranam-piaramanidin'i Mandalay, nitodi-doha nankany Mogok ho an'ny drive ora 7. Mijanona amin'ny toeran'ny toeram-pisavana, ny "visa" faharoa dia ilaina hiditra ao Mogok. (tsy fahazoan-dàlana fa fanomezan-dàlana manokana) Ny andro dia miposaka ao Mogok.Izany mangatsiaka amin'ny alina amin'ny ririnina, ary mafana mandritra ny ...
Fampiofanana amin'ny varotra varotra amin'ny Sabara Angkor Resort & Spa
Fampiofanana fampiroboroboana ny varotra ao Sabara Angkor Resort & Spa Ms Iet dia manofa ireo mpanolo-tsaina sy mpitantana ny Sabara Angkor Resort & Spa ho an'ny fivarotana ny firavaka, izay tsy natao afa-tsy tamin'ny vatosoa voajanahary avy any Kambodza.
Fanadihadiana nataon'ny fahitalavitra Vietnamiana
Fanadinadinan'ny fahitalavitra Vietnamiana nadinadinako androany tao Luc Yen, avy amin'ny fahitalavi-pirenena Vietnamiana, momba ny tsena vidin'ny Venezoeliana sy ny harena ankibon'ny tany. Ny fampielezam-peo dia natokana ho an'ny volana manaraka amin'ny VTV1 sy VTV3.
Resadresaka tamin'ny fahitalavitra frantsay
Fanadinadinana tamin'ny fahitalavitra frantsay noraisiko tamin'ny fantsom-pahitalavitra M6 "ENQUETE EXCLUSIVE", momba ny vatosoa Kambojiana.
Ny Beers mivarotra diamondra diamondra toy ny vatosoa
Ny vondrona De Beers dia nanambara ny fanombohan'ny orinasa iray vaovao antsoina hoe Lightbox Jewelry izay hanomboka hamantatra ny marika vaovao amin'ny diam-pantsika diamondra amin'ny alàlan'ny anarana Lightbox tamin'ny volana septambra 2018, izay manome ny mpanjifa avo lenta sy ny lamaody amin'ny lamaody amin'ny vidiny ambany noho ny diamondra efa misy diamondra. Diamondra diamaty hazandrano ho an'ny varotra ...